Emerging: iyo Internet chikamu pamusika wemusika | Ehupfumi Zvemari
Internet Europe ndiyo indekisi inounganidza makotesheni emakambani akakosha mune ino tekinoroji mukondinendi yekare uye, maanosanganisirwa kubva kumakambani akabatanidzwa kuenda kune vamwe mukuita kwekuwedzera. Kunyangwe icho chinopihwa chinopihwa neichi chikamu chemusika wemasheya chiri pachena pazasi peavo varipo parizvino ne North America kana maJapan mabhegi, zvese zviri zviviri muhuwandu uye huwandu. Chero zvazvingava, inoita imwe sarudzo kune izvo zvinofarirwa nevashambadzi vadiki nepakati. Muchikamu, ichokwadi kuti mashandiro ayo mumisika yemari inotakura dzimwe njodzi.
Iwo makambani makuru eInternet akaiswa muzvikamu zvetekinoroji kuitira kuti vese vatengesi vagone kushanda mavari, mushure meiyi gwanza rakatarwa kubvira pakabaya tekinoroji. Kwemakore akati wandei, ivo vakaunganazve mune inonzi Internet Europe chikamu, uko kunoratidzika kuve kusipo kwemakambani eSpanish. Hazvishamisi kuti hapana chimwe cheizvi hunhu chakanyorwa pamusika wenyika unoramba uchienderera. Kana zvisiri, pane kudaro, hapazove nesarudzo kunze kwekuenda ku Imwe nzira Stock Market (MAB) kutsvaga kambani ine mbiri iyi.
Zvizhinji zvezvipo zvekutengesa hazvizivikanwe kune vatengesi vevatengesi sezvo mazhinji acho ari maitiro ekuwedzera. Nekukoshesa kwakati wandei mumisika yemari nekuda kwehunhu hwayo. Kunyangwe izvi, kupihwa kuri kure kwazvo kubva kune kwakapihwa neWall Street, inova imwe yesimba kwazvo pasirese. Zvese zviri zviviri muhuwandu uye mhando uye pamberi pechiGerman neJapan chinopa icho chingave chimwe chinyorwa pasi apa. Iko kushomeka ndiko kunowanzoitika kwezviito zvavo, nemisiyano yakafara pakati pemitengo yavo yepamusoro neepasi.
1 Maitiro ekudyara mari paInternet
2 Mipiro mune ino investa
3 Ivo havasi kugovera zvikamu
4 Hapana kuratidzwa pamusika weSpanish wemusika
5 Tora zvinzvimbo mumakambani aya
Maitiro ekudyara mari paInternet
Iyo inzvimbo isina kugadzikana, uko asiri makambani ese akanyorwa muzvikamu anotongwa nemirau imwechete yemusika wemasheya. Ivo vanoita kwazvo kune ekufungidzira ekucheka mashandiro kana kunyangwe kukudziridza mafambiro pazuva rimwe chete kana intraday. Chero zvazvingaitika, ivo havana kukodzera chaizvo kuzviita mukati nepakati kana kwenguva refu nekuda kwenjodzi yavanosanganisira yerudzi urwu rwekushanda. Kune rimwe divi, ivo vanoonekwa nekuchinja kwakasimba kwavanenge vari mumutengo wavo pamisika yemakero kwavakanyorwa.
Nepo pane zvinopesana, ivo vanogona kugadzira iyo ane hasha mari yekudyara kune vashoma uye vepakati varimi. Semhedzisiro yehunhu uhwu, zvinogona kutaurwa kuti kirasi iyi yekuchengetedzwa kwakanyanya haina kukodzera kune ese mafaera evanoponesa nekuti anogona kukonzeresa rimwe dambudziko mukutungamira kwavo kwenzvimbo yekuchengetedza. Sezvazvakaitika mumakore achangopfuura, uko pakatombove nezviitiko umo varimi vasiya ma euro mazhinji kumashure. Ngozi yako, saka, yakanyanya kukwirira kupfuura mune zvimwe zvekuchengetedza.
Mipiro mune ino investa
Maitiro akasunganidzwa neInternet chikamu anosiyaniswa nekuti akanyatso tsanangurwa uye anovaita akasiyana nevamwe zvimwe zvetsika zvikamu. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei zvichikosha zvikuru kuziva kuti ndeyipi misika yekutarisisa. Haasi ese akakodzera kuzadzisa ichi chinodiwa. Hazvishamisi kuti kugoverwa kwemusika weEuropean stock kuri kuperevedza kana kuchienzaniswa nechisungo cheNorth America neJapan misika yemasheya. Hapana chechengetedzo mune ino chikamu chinoshanda mumari muSpain. Iko hakuna mumwe mushonga kunze kwekuenda kuGerman, French kana kuItaly stock exchange kuti unoita mamwe mabasa ekutenga nekutengesa pamusika wemasheya.
Kune rimwe divi, hazvifanirwe kukanganikwa izvo mikana yekudzokorodza mune aya maitiro eemaquity equities akakurisa nekuda kwehunhu hwavo hwakakosha. Asi zvakare nenjodzi yakanyanya kwazvo yekuti vanogona kudzikira nehumwe kusimba uye kusvika pakurasikirwa nechikamu chakanaka chekukoshesa kwavo mumisika yemari. Ichi chinhu chinofanirwa kutariswa kana uchihaya zita rako uye udzivise kushamisika kusinganzwisisike pakuongorora kwako. Sezvakaitika mumakore apfuura nezvimwe zvekuchengetedzwa kubva kuInternet chikamu.
Ivo havasi kugovera zvikamu
Chimwe chezviratidzo zveaya akachengetedzeka zvakanyanya ndeekuti iwo akanyorwa makambani asingagoveri chero chikamu chemubhadharo. Ndokunge, kuburikidza navo haugone kuwana yakatarwa uye yakavimbiswa kudzoka gore rega. Pamwe nekuti makambani ayo panguva ino havawani mabhenefiti mune yako bhizinesi mari chirevo. Ichi chinhu chinobvisa kwavari zvimwe zvekufarira pamberi pevanozvidzivirira kana vanochengetedza mari mumisika yemari. Ndiani anoda kugadzira portfolio yemari yakatarwa mukati meiyo musiyano uye kuti kuburikidza nekirasi iyi yemakambani ivo havakwanise kuzadzisa zvinangwa zvavo zvavanoshuvira.
Kune rimwe divi, iri chikamu chemusika wemasheya, icho kunyange hazvo chichifarira vazhinji vevashambadziri uye neramangwana rakawandisa pamberi pacho, ichokwadi zvakare kuti chakanyanyisa kukosheswa zvichienzaniswa nezvimwe zvikamu zvemasheya. Dzimwe nguva nemitengo iri pamusoro pezvaunotarisira mumisika yemari uye izvo zvinogona kuburitsa yakasimba kwazvo kucheka kana kururamisa mukuenderana kwemitengo yavo. Izvi zvinovaita kuti vabude pachena pakuona kwakasiyana misiyano yavanoratidza pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi uye kuti vanokwanisa kusvika pamatanho akatokwira kudarika mashanu muzana muchikamu chimwe chete chekutengesa. Saka iwe unofanirwa kuve unongwarira zvakanyanya kana uchitora zvinzvimbo muvamiriri vako.
Hapana kuratidzwa pamusika weSpanish wemusika
Ehezve, zvaiita kunge zvisinga fungidzike mwedzi mishoma yapfuura uye kunyanya pakupera kwa2019 kuti iyo inosarudzika indekisi yemarudzi equities yaizosvika padanho padyo ne9.600 mapoinzi. Asi chokwadi ndechekuti index inosarudzika yakabudirira pakupera kwezuva, kunyangwe pasina rubatsiro rweInternet chikamu mumusika wemasheya. Kungoti nekuti havapo kubva pakutanga. Chete munguva apo Terra Yakava imwe yemakumi matatu nematanhatu akanakisa emahofisi eSpanish, asi ichizopera munzira iyo isu tese tinovarangarira nayo. Mushure mekukwira kwakatenderedza zana nemakumi mashanu ema euro sitoko yakadonha ikabuda kunze kwenyika index.
Ichi ndicho chiitiko chega chechero kukosha kwakachengetedza imwe mhando yekubatana neInternet chikamu uyezve zvaive zvisina kunaka kune chikamu chakakura chevashambadzi vadiki nepakati. Kana zvisiri izvo zvinopesana, zvainyatso kuodza moyo nekuti maeuro mazhinji akasiiwa munzira, uye kunyangwe paine njodzi iri pachena inobatanidzwa muzviito zvavo mumisika yemari. Uku ndiko kuongorora kubva pamhedzisiro yakawanda inofanirwa kutorwa kwemakore anotevera sezvo iri chikamu chinobuda pachena chine ramangwana chairo.
Tora zvinzvimbo mumakambani aya
Kana paine chero chikonzero chako chishuwo chiripo ndechekuvhura zvinzvimbo mukambani ine hunhu hwakakosha, unenge usina sarudzo kunze kwekutevera nhungamiro yemaitiro yekudzivirira yako inowanikwa capital mumari. Hazvishamisi kuti iwe unogona kurasikirwa nezvakawanda kubva zvino zvichienda mberi, seizvo chiitiko mumakore apfuura chakakuratidza. Nechekuteedzana kwekurudziro iwe kwaunofanirwa kunyorera pamwe nechirango uye nedosi rakanaka rekuomarara mukudyara. Sezvo mune anotevera mapoinzi atinokufumura pazasi:
Iwe unenge usina sarudzo asi enda kunze kwenyika, kumisika yepasi rose, kuzadzisa ichi chakakosha kudiwa. Kunyanya, mumakwere ari muUnited States, ndimo mune izvi zviyero zvatiri kutaura nezvazvo panguva ino zvakanyanya kusimbiswa.
Su volatility inowanzo kuve yakanyanyisa uye mune chero mamiriro ezvinhu yakakwira kupfuura iyo inoratidzwa nemamwe matunhu emasheya pane epasi rese stock exchange. Iko kunofanirwa kuti iwe uzive mashandiro nerudzi urwu rwezvitoro zvemusika zvirevo.
Iko kupihwa hakuna kupamhama, kunyangwe iri imwe yemasekete anga achikura zvakanyanya mumakore achangopfuura, sezvo zvine musoro kufunga nekuda kwehunhu hwayo. Haisi chikamu chinotora, asi zvinopesana iri kubuda Hazvina kufanana.
Unozofumurwa kunzwa kutsva mumisika yemari sezvo izvi zvekuchengetedza zvichitongwa nedzimwe nzira kunze kweawo mamwe ese zvikamu zvebhizinesi zvakanyorwa pane epasi rese stock exchange.
Semumativi ese mumisika yemari, kune tsika dzakanaka kupfuura dzimwe uye ndipo panofanirwa kutungamirwa sarudzo dzako kubva zvino zvichienda mberi. Pamusoro pezvimwe zvekufunga nezvehunyanzvi.
Uye pakupedzisira, ongorora kuti iwo makambani kuitira kuti usave nawo mune akareba mazwi. Kana zvisiri, pane kudaro, ivo vanofanirwa kuve nguva pfupi yekugara. Ukangowana purofiti, unofanirwa kumisikidza mashandiro kuti unakirwe nemari inowanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Ari kubuda: iyo Internet chikamu pamusika wemusika